NewsBlur, ndi ozo di | Site na Linux
NewsBlur, ndị ọzọ dị
mgbochi | | Aplicaciones, Ndị ọzọ
Lee ezi echiche banyere faili ntanetịime! Nwere ike ijikọ saịtị niile ịchọrọ ma jiri nwayọ gụọ ha, na-enweghị ịga na saịtị oge ọ bụla iji hụ ma ọ dị ihe ọhụụ apụtala. Ana m eji ihe ntanetị eme ihe (gburugburu saịtị 40, obere ma ọ bụ obere obere), mana amaara m ndị na-edebanye aha ihe kariri 700 ederede. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya na n'ezie, jọgburu onwe ya.
Ana m agwa ndị na-ege ntị ihe ọmụma nke Google Reader. Ogugu akwukwo nri ebe nile. Mana nke ahụ anaghị eme ka ọ bụrụ nke kachasị mma, ma ọ bụ nke kachasị mma. Karịsịa, mgbe ịkpụ na ọrụ mmekọrịta ọ na-efunahụ ya Google+ (ihe edere ugbua ezuola). N'ikwu eziokwu, anaghị m eji ha eme ihe, nke ahụ abụghị isi ihe mere m ji kwụsị ya. Akwụsịrị m iji ya n'ihi na achọpụtara m (ekele maka ederede a) NewsBlur nke ahụ na-abịa iji dozie ihe niile m chọrọ, na ọrịa strok. Ka anyị lebakwuo anya na njirimara ya, ka ị hụ ihe mere m ji hụ ya n'anya nke ukwuu.
Kedu ihe dị mma na ya?
Ọtụtụ. Malite na imewe. Google Reader Ọ jọgburu onwe ya mgbe m hapụrụ ya, ọ nwere ike ịkawanye mma kemgbe ahụ. Ma NewsBlur Ọ dị ezigbo mma etu ọ dị ugbu a na imewe ahụ doro anya ma dịkwa mma. Ihe niile edoziri kensinammuo. Ebe a na-egosi ihe isi ike kasịnụ na nke ahụ bụ NewsBlur asugharighi ya. Ọ bụghị na e nwere ọtụtụ ihe ị ga-aghọta, mana ụfọdụ ga-adị mma n'asụsụ ndị ọzọ. Ka anyị buru ụzọ hụ otú echiche dị mma dị:
Onweghi ihe obula. Ọ bụrụ na ha atụgharị n’aka nri ha ga-ahụ ndepụta ndị m na-eso ma nwee ozi ọma. Ihe magburu onwe ya NewsBlur bụ ikike ịgụ ihe jiri amamihe. Na akara akara nke mbipụta, saịtị, ndị ode akwụkwọ na ọbụlagodi okwu na aha; anyị nwere ike ịnye saịtị ọ bụla ma gụọ nwayọ karịa, niile edepụtara dabere na mmasị gị. Na okpuru bu mgba ọkụ nke ahụ na-enye anyị ohere ịgbasa ma ọ bụ mechie ụdịdị dị iche iche, ịgụ naanị na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ [ihe anyị kwesịrị ịmasị], na odo [nkịtị] ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abịa na faili ntanetịime niile. Dị oke uru ma ị soro otu saịtị na-emelite oke ọsọ ọsọ.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị gbanwee aka ekpe ị ga-ahụ echiche atọ ị nwere NewsBlur: Mbụ, Nri na Akụkọ. Akụkọ nlere anya bụ ụzọ isi lelee saịtị ahụ n'ime ndepụta agụ. Nke a dị mma, n'ihi na ọ na-enye anyị ohere ịza ajụjụ na-ahapụghị ma ọ bụ gbapụ na faili ntanetịime naanị gafere akụkụ nke ederede ahụ. Ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-anaghị agafe ihe oyiyi ahụ. Lee nkọwa zuru ezu:
Echiche mbụ bụ otu, mana ọ na-aga n'ihu ihu saịtị ahụ ma ọ bụghị akụkọ nke ọ bụla. Echere m na nke a bara uru mgbe ị gara na saịtị ọhụrụ site na blọgụ, nke m ga-akowa ma emechaa. Ugbu a, ka anyị lekwasị anya na sidebar:
Na akara ojii, anyị nwere ike ịghọta otú ndị na-ekewapụ; ha na-ebi akụkọ ndị anyị chebere ka anyị gụọ ma emesịa ma ọ bụ ka ha ghara ifu n'iju ozi. Ozugbo, blọgụ. Ndị a bụ oghere ebe ndị ọrụ na-ekerịta akụkọ nke anyị na-aza ajụjụ, agbanyeghị na ịpị bọtịnụ "Share" zuru ezu. Dịka ị pụrụ ịhụ, ha nwere ike inwe ezigbo aha; ọtụtụ n'ime ha dị nnọọ iju. Anyị nwere ike ịhapụ ha dịka anyị chọrọ, yana agba ndị otu ngwa ahụ na-enye anyị ma ọ bụ jiri CSS nke anyị, agbanyeghị na enweghị m ike ịnwale nke ikpeazụ.
Na na ala, faili ntanetịime onwe ha, iyi ọ bụla nwere ọnụọgụ ozi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ edo edo nwere. Ọgụgụ isi nke NewsBlur na-eme ka ihe niile dị ụtọ nke ukwuu. Ọ bụ ezigbo obi ụtọ iji kọwaa ihe ma nwee ọdịnaya dị na ịpị aka.
E nwekwara ngwa mkpanaka. Ana m eji onye isi android, ma ogologo oge gara aga ụdị mbipute na-akwadoghị nke a maara dị ka Agba. Ngwa ọrụ gọọmentị na-adaba mgbe ụfọdụ, mana ọ mara mma na ojiji izugbe. Dị maka android na maka iOS na nsụgharị ndị isi, mana amaara m ịdị adị nke onye ahịa maka MeeGo. Ka ị na-etolitekwu ọrụ nke ikpo okwu, ọ ga-aka mma anyị ga-eji ngwa ndị ọzọ.
Emechaa uru ndị a niile, gịnị ka ị na-eche ịnwale ya? Kwụsị dabere na Google maka ihu ọma maka nwa amụrụ ọhụrụ na nke nwere ezigbo enyi ga-ekwe m omume. Otu ụlọ ọrụ (na mpaghara teknụzụ, n'ezie) nwere ike ịdenye aha na isi mmalite niile na ọ nwere ike ịkekọrịta ya posts nke dabara gị mma. Ezigbo azụmahịa, ị na-eji ọdịnaya ndị ọzọ akpọsa onwe gị yana naanị ịkekọrịta ya. Enweghị ohi.
NewsBlur Ọ bụ mmalite na obere oge n'okporo ụzọ. Akaụntụ na-enye gị ikike ịgbaso saịtị 64 na otu ụdị adịchaghị maka ọnụahịa ị nwere ike ịhọrọ. O nwere ike buru oke oke, mana anyi nwere ike inyere oru ohuru nke n’abia n’uwa n’ike.
Nke kachasị mma, ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. Ọ bụghị onye nzuzu ka m ga-akwado ihe naanị ebe a ma ọ bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma m maara banyere ihe ọhụụ na ikikere isi mmalite. Ọbụna ngwa mkpanaaka na-ebipụta n'okpuru ikike MIT, nke na-agwa anyị gbasara ntinye nke Samuel Clay ya na oru ngo. Ekwenyesiri m ike ịzụta ndenye aha ahụ adịchaghị ozugbo ị gafere ebe 64, karịsịa ma ọ bụrụ na ịmalite iji bitcoins kwa, dị ka onye nrụpụta isi You na-atụle.
Ọ bụrụ na ha chọrọ ịbanye, ha nwere ike ịchọ m ozugbo m ma ọ bụ akụkọ kasị ewu ewu nke saịtị ahụ, nke na-anakọta akwụkwọ ọgụgụ kachasị mma. Ndị ka na-asụ bekee ka jubigara ya oke, mana ọ ga - aka mma. Egosiputara na uzo ozo adi. Na na ị nwere ike ịkwado ihe m hụrụ n'anya na ị ga-ahụkwa n'anya.
Debanye aha na newsblur.com ịmalite ịnwale ya, echefuru m inye njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » NewsBlur, ndị ọzọ dị
M na-akwado http://www.feedly.com
Ana m akwado GoodNoows
Anyị kwesịrị ime ndepụta nke faili ntanetịime :).
N'oge a otu onye Opera jikọtara na-aga nke ọma maka m, mana ka anyị hụ ka o si arụ ọrụ.
N'ikwu eziokwu, ọ dị mma, mana nke ịmachi onwe m na saịtị 60 dị ka mba .. Na Google Reader enwere m ndebanye aha 185 ma enwere m ike ịgbakwunye ọtụtụ m chọrọ. Ọ jọgburu onwe ya, ee, mana ọ naghị egbochi m n ’ụdị ahụ.
A na m ejikwa Akregator otutu ihe ma aga m anwale goodnoows ka m hu otu o si aru oru 😀
Kpamkpam, ụdị ọrụ a dị mma maka ọgụgụ isi iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọ dị ezigbo mma, ikwu nke kachasị.
Ndị na - agụ akwụkwọ ntanetị dabere na ngwanrọ na - akwụghị ụgwọ, nke otu nwere ike itinye na sava nke ha:
Obere RSS: http://tt-rss.org
Newsblur bụ n'efu, mana ọ dị gị ka ịchọọ sava raara onwe ya nye yana kọmputa raara onwe ya nye, n'ihi na ntuziaka nwere ihe ... 🙂
N'ezie, o siri ike ịwụnye ya. Ọ bụrụ n’ịchọghị echiche onye na - agụ akwụkwọ ntanetị, onye na - agụ desktọọpụ ezuola. Mana ịkwado ndenye aha adịghị ka ezigbo echiche nye m, ewezuga inwe ike ịkpọtụrụ ya ebe ọ bụla.
Ọtụ, ma ọ bụghị m achọ ịma njikọ ahụ isiokwu!
Zaghachi Jean Ventura
A rookie ndudue. Tụlee na enwere m nchicha ahụ nwa oge. http://www.newsblur.com
M ji a ọrụ ihe karịrị otu afọ. Ekwenyeghị m na Google Reader n'ihi ọnụọgụ data ọ na-echekwa na ụlọ ọrụ a. Emechabeghị m ikwere "Dont Be Evil."
Amaara m na enwere ndị na - agụ akwụkwọ nri ndị ọzọ mepere emepe, mana echere m - mezie m ma ọ bụrụ na m mehiere - ọ bụ naanị ya na igwe ojii na - arụkọ ọrụ. Ọ baara m uru nke ukwuu ka mekọrịta mmekọrịta m na kọmputa m dị iche iche, jiri OS dị iche iche yana ọbụlagodi site na webụ site na ngwaọrụ ndị ọzọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka nwere obere ihe iji meziwanye ma chinchi iji dozie ya na nsụgharị ya niile; ka o sina dị, echere m na Samuel na-arụ ọrụ magburu onwe ya.
Kedu ihe bụ blurblog gị? Anyi aghaghi iwusi onwe anyi ike na obodo ohuru a, asim. Ọzọkwa, DesdeLinux nwekwara ike ịme nkwupụta okwu ma kesaa akụkọ na isiokwu nke ya na nke blọọgụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
Ajụjụ a na-ada ka nzuzu mana… Olee otu esi etinye ya? Olee otu esi enweta ya? Ọ dị mma maka ndị ọkachamara mana… na maka ndị nke anyị na-amalite? Biko elegharala anyị anya, kọwaa otu esi eme ya.
Onye ọ bụla jụrụ ajụjụ mụtara na onye na-achị ọchị n’ajụjụ ahụ na-echezọ na ha nwekwara ịjụ ịchọpụta. Onweghi onye amuru amuta ... Ma obu
Gaa na http://www.newsblur.com na debanye aha. Ọ na-ada nzuzu, mana m tụfuru ya.
Anti, mgbe ahụ, m na-ajụ ya. Enwetụbeghị m ọrụ mmekọrịta. Mgbe ahụ, m na-agwa ya ma biputere ya.
Ọ bụ ọrụ weebụ. Nwere ike ịdebanye aha ma jiri ya site na http://www.newsblur.com
O nwekwara ngwa maka android na IOS na ụlọ ahịa ha. Naanị ịchọ "newsblur". Nke gam akporo bu n'efu, echere m na ios otu.
Huew, M na-eji Liferea, ọ dị ntakịrị ma ọ bụ ịhụnanya.
Na-akpali mmasị, ọ bụ ezie na okirikiri nhọrọ ukwuu nke NewsBlur anya jọgburu m: / M na-ahọrọ iji Google Reader na ahịa. Na Linux m na-eji Lightread, ma na Android na iOS enwere m nri (na gam akporo enwere m beta nke ngwa ahụ).
Ndewo, post a dị m mma.
Ka m na-eji kde, a na m eji akregator eme ihe ọ bụla mana ọ ga-amasị m iji ndị ahịa desktọọpụ na-echekwa ntanetịime ntanetị, dịka ọmụmaatụ na ndị na-agụ google, ma na-arụkọ ọrụ yana ndị ọrụ desktọọpụ.
Aro ọ bụla maka debian?
Iji dozie ọdịdị na arụmọrụ nke Google Reader na Firefox enwere ngwa mgbakwunye GoogleReaderPlus:
Ọ na-enyekwa ohere ibupụta peeji ndị dị n'ime etiti ahụ na akpaghị aka ma ọ bụ na-achọ ya, ụzọ a na-esote ma ọ bụ nkọwa nke mbụ site na ịpị bọtịnụ òké, mmegharị òké, njikọ https, wepu mgbasa ozi, gbanwee nha ederede, jiri isiokwu Firefox People, wdg ...
Ọ bụ ezie na ọ nweghị ọtụtụ ihe ọ ga-eme, maka gam akporo ọzọ zuru oke ma dabara adaba maka itinye RSS ma gụọ ha na-anọghị n'ịntanetị bụ JustReader:
Nkesa kachasị ewu ewu na 2012 na Distrowatch
Otu esi echebe saịtị anyị site na iji .htpasswd + Ihe Nlereanya